Ahina ho potiky ny ady… : natao sary 3D avokoa ireo vakoka any Siria | NewsMada
Ahina ho potiky ny ady… : natao sary 3D avokoa ireo vakoka any Siria
Par Webmaster Two sur 15/03/2016
Efa anjatony ny toerana manan-tantara sy vakoka sarobidy norobaina na potiky ny ady any Siria, hatramin’ny nanombohan’izany, ny taona 2011. Tsy nisalasala ireo silamo mahery fihetsika (Daech) nandaroka baomba ny tempoly lehibe sady malaza ao Bêl sy Baalshamin, ao Palmyre-Siria. Manoloana izany, natao sary 3D ireo hany sisa tsy ringana, sao tsy hisy hahalala akory hatramin’ny endriny.
Tompo-marika amin’izao asa goavana, nanomboka tamin’ny taon-dasa izao, ny orinasa frantsay Iconem, miaraka amin’ny Microsoft, ny Institut français de la recherche en informatique ary ny fitantanana ireo zavatra tranainy sy vakoka ary mozea ao Siria. Azo jerena ao amin’ny « internet », manomboka androany, ireo vakoka natao sary 3D ireo.
Nampiasa fitaovana avo lenta, toy ny « drones » na fiaramanidinakely tsy misy mpamily, ireo manampahaizana mba ahazoana ny sarin’ireo toerana sy trano manan-tantara. Teo koa ny « photogrammétrie », ahafaha-mamerina amin’ny antsipirihany ny endriky ny trano. Nanofana arkeology sirianina ihany koa ireo mpanatontosa ny tetikasa mba hanampy azy ireo.
Anisan’ireo efa vita sary 3D, ohatra, ny Krak des Chevaliers, naorina tamin’ny taonjato faha-11 sy ny toerana antsoina hoe Ougarit, izay niaingan’ny soratra faran’izay efa ela indrindra teto ambonin’ny tany.
Tsara ny manamarika fa hanao fampirantiana tena hafakely ny Institut pour l’archéologie numérique, izay noforonin’ny oniversiten’i Oxford sy Harvard. Tena miavaka ity fampisehoana, hatao any Londres sy New-York amin’ny avrily, ity, satria ny sarin’ny iray amin’ny andry lehibe tao Palmyre, izay noravan’i Daech. Mitovy habe amin’ny tena izy ity haseho ity.